lovetheworld - lwanpaishin Blog
သို့ / အကြောင်းအရာ။.........။ ရာထူးနုတ်ထွက်သူအား ပြန်ကြားစာ ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းအဆင့်သို့ လျှော့ချပေးရန် လျှောက်တင်ထားသော အသင်၏ စာအား ဖတ်ရှုပြီးနောက် အထက်လူကြီး အုပ်ထိန်းသူမိဘများနှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အသင်လာရောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ်က ချစ...
Tags : ရည်းစားစာ
သို့ / အကြောင်းအရာ။..........။ ချစ်သူရာထူးမှ နုတ်ထွက်ခြင်း ကျွန်တော်မျိုး တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် တစ်နှစ်သာကာလအတွင်း သခင်အပါး အမြဲခစား လေ့လာသင်ယူခဲ့၏။ အမိန့်တော် နာခံခဲ့၏။ သခင့်အလို အမြဲဖြည့်ဆည်းခဲ့၏။ နေကောင်းကျန်းမာပါသလားဟု အမြဲ မေးမြန်းလျှောက်တင်ခဲ့ရ၏။ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း အချစ်ခံရသူအဖြစ် သခင်ခံ...
ခင်ဗျားတို့ကို အဖြစ်အပျက်တစ်ခု ပြောပြမယ်… အဖြစ်အပျက်လို့ ဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုရင် ပုံပြင်တစ်ခုမဟုတ်လို့ပါ.. ဒီအကြောင်းကိုသိလိုက်ရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်… တခါက လူတစ်ယောက်မှာ ငါးနှစ်အရွယ် သားလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်… တစ်နေ့သူရုံးကနေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာ အိမ်ပြန်တော့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတဲ့သူ့ကို တခါးဝမှာမျှော်နေတဲ့ ...
Tags : ဆောင်းပါး
သင်သည်မိမိ၏ တတ်နိုင်စွမ်းဖြင့်ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်သူဖြစ်ပါစေ
@သင်သည်မိမိ၏ တတ်နိုင်စွမ်းဖြင့်ကမ္ဘာမြေကို ကယ်တင်သူဖြစ်နိုင်ပါသည်။ @ ကမ္ဘာမြေကြီးက သင့်ဆီကို အကူအညီတောင်းတဲ့ သ၀ဏ်လွှာတွေပို့ပေးနေပါတယ်။ဒါတွေကို သင်သတိ မထားမိလို့ပါ။ `သ၀ဏ်လွှာကတော့´ Global warming (ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း) #Green house effect လို့ခေါ်တဲ့ CO2 ရာနှုန်း မြင့်တက်မှုကြောင့်ပေါ့။ဒါတွေဘာလို့ဖြစ်တာလဲ...
Tags : ဗဟုသုတ
Tags : ရသ
နှင်းဆီပန်း၏သင်္ကေတများနှင်းဆီပန်းဟာအချစ်၏သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်းအားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ နှင်းဆီပန်းဟာ အရောင်နှင့် အရေအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ဆိုလိုရင်းတွေဟာလည်းအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ကိုယ်ချစ်သူကို နှင်းဆီပန်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ပေးတဲ့အရောင် အရေအတွက်တွေကို သိနေမှဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။ မဟုတ်ရ...
ဒီလိုနဲ့..... ဒီလိုနဲ့..... ဒီလိုနဲ့ပေါ့..................... ကြာရှည်ခဲ့ပေါ့
လိပ်ပြာတောင်ပံခတ်သံထက် ပိုပြီးတိုးတိတ်လွန်းတယ်.... ရင်ခွင်တစ်ခုလုံးကိုဗြောင်းဆန်အောင် ရိုက်ခတ်သွားတာပါပဲ... နာကျင်မှုရဲ့ အလျင်မြန်နှုန်းက အသိတွေအားလုံးကို ခေတ္တတော့ စုံကန်းသွားစေတယ်... ဒါဟာ အင်မတန်သိမ်ဖျင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ခပ်ညံ့ညံ့တစ်ခုပေါ့... အခုငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ခပ်ဆိုးဆိုးလိပ်ပြာတေ...
Tags : ရင်ခွင်မဲ့
ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းလေး စီးဆင်းနေတဲ့ သံစဉ်တွေမဆုံးခင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ ညနေ ခင်းတစ်ခုမှာ အမောပြေ သူ့အသံလေးကို ညင်သာစွာပြန်လည်ကြားယောင်ရင်း သူ့ ရဲ့ဖြူဖွေး နုနယ်တဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ယောင်မိ ညင်သာလှတဲ့သူ့ရဲ့အသံလေးတွေ ရင်ထဲထိတိုးဝင်လာ ပြီးတုန်ရီမောဟိုက် နွမ်းလျလာတယ်။ နာရီပိုင်းတောင်မခြားတဲ့မိနစ် စ...
လူရယ်လို့စဖြစ်လာတဲ့နေ့မှာ ဘ၀ဆိုတာကိုစရတော့တာပါပဲ။ ထိုဘ၀အစမှာပင် အနိမ့် အမြင့် အဆင့်အတန်းတွေဟာ အများကြီးပါ။ လူအများစု ဟာ ဘ၀ဆိုတာကို ငွေ၊ ဂုဏ် ပကာသနပေတံတွေနဲ့ တိုင်းတတ်ကြတာ သဘာဝ ပါ။ အဲဒီကြားထဲကမှ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းရင်း အရွယ်ရောက်သော် ပြည့်စုံသောဘ၀ တစ်ခုကို လူတိုင်းတည်ဆောက်ချင် တယ်။ ဘ၀တစ်ခုအစမ မြဲတာကြောင်...
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အတုယူစရာ သင်ခန်းစာ ( ၁၀ ) ချက်၁။ တည်ငြိမ်မှု့ ရင်ဘတ်စည်တီး ငိုကြီးချက်မ၍ ယူကျုံးမရ အပူလုံးကြွသူ မတွေ့ရ ။ သောကကို တည်ငြိမ်စွာ ဖြေဖျောက်နိုင်ကြသည် ။၂။ ဂုဏ်သိက္ခာ ရေနှင့်စားသောက်ကုန်များကို စည်းစနစ်တကျ တန်းစီယူကြသည် ကြမ်းတမ်းသောစကား ရိုင်းစိုင်းသော အမူအရာ လုံးဝ မတွေ့ရ ။၃။ စွမ်းရည် သာဓကအာြး...
Tags : အတုယူစရာ
အချစ်များ ဆုတောင်း အချစ် ဟီးဟီး အတွေ့အကြုံ စမ်းများ သုတ ရသ အတုယူစရာ ဆောင်းပါး ရင်ခွင်မဲ့ ဗဟုသုတ ရည်းစားစာ
© 2018 lovetheworld
Antal besøg: 12252